Namuhla, siyinake uzobe Abaqondisi for ezikulolu "PV" wethulwa. Ngokuvamile, yebo, lokhu inkinga ngempela ebanzi, baqonde akusiwona kulula ukuthola. Phela, imidlalo inthanethi, njengoba umthetho, imisebenzi eminingi kanye amabhonasi zihlukaniswe inombolo enkulu izingxenye. Plus, akuzona zonke izihloko e umdlalo kungenziwa iqembu noma wedwa. Ngakho alungele ezingalindelekile. Phakathi kwezinye izinto, esiqondisa sesihloko ku "PV" usizo abadlali ziphathelene izici of ukuhumusha Russian we ulimi Korean. Kuyinto akuvami kucaca ukuthi nokuthi udinga ukwenza. Ake ukubhekana nale nkinga ngokushesha ngangokunokwenzeka. Mhlawumbe izihloko - ngokuvamile into nje engadingekile, sadlala ngesikhathi? Noma ngempela umsebenzi uyakufanelekela okuyinto kungaphansi abadlali evelele kunawo futhi emincanyana kuphela?
Yini futhi Kungani
Okokuqala nje, ake sixoxe ngalokho isihloko jikelele "PV"? Njengoba ungase ukuqagela, kungcono ezinye uhlobo uphawu oluzovela emhlabeni isidlaliso uhlamvu yakho. Into ezengeziwe, efanekisa labo noma ezinye impumelelo.
Uhlu ezikulolu "PV" (khaphi them kanye) kushintsha njalo. Nge ngamunye buyekeza ezinkulu kukhona more and more. Kodwa kungani? Indlela lokhu uhlelo idonse abadlali? amabhonasi abo. Into wukuthi ezikulolu "PV" zihlukile. Abanye bamane nje okucashunwe ezivamile phezu kwekhanda lakhe, futhi abanye ukunikeza umfutho izibalo. Okungukuthi, benza wena namandla. Ngeke ngasho kanjalo, kodwa namanje. Ngakho-ke, abadlali ngenjabulo enkulu ukuthi enze imisebenzi abasinikezayo ohlelweni.
Noma yimuphi Umhlahlandlela isihloko kule "PV" Kumelwe okokuqala sikhulume ngokuthi kungaba "umbhalo owawuphezu kwekhanda lakhe." Sinalokhu kwaziswa kungenzeka ukuba bafinyelele iziphetho mayelana nesidingo ukwenza imisebenzi ethile ngenxa. Phela, njengoba kuye kwashiwo, akuzona zonke izihloko ukunikeza ukukhushulwa izimfanelo uhlamvu. Ngaphezu kwalokho, ezinye ziyakwazi a precipice ngokuhamba kwesikhathi.
Can uhlukanise zonke iziqu ekuqaleni ngezigaba eziningana. Okokuqala - ke kungokwaphakade. Ababona, njengoba ungase ukuqagela, etholakala kanye qha kwenela. Akasoze zalezi ziqu ngeke ube yize. Ngisho noma kuzoba khona iminyaka eminingi. Ngokuvamile, lawa ongakhetha ukunikeza umfutho izibalo.
Esesibili - isikhathi. Akunzima ukuqagela ukuthi zingabantu ngesikhathi. Ngokuvamile nje ubuhle. Noma ukuze abonise abanye impumelelo lonke iseva ekhethekile. Ukusebenza ngokuvamile ayiphazamiseki.
Khona-ke ungakwazi banake yokuthi abaholela sesihloko ku "PV" kufanele sifake ngaphansi kwesihloko esithi "Ukubhekana Namaqiniso Eshintshile Izinkundla". Lokhu isimo, okuyinto ingatholakala kuphela uma izenzakalo ezithile zenzeka. Kungenzeka yesikhashana, kodwa ngokuvamile kukhona unomphela. Zisetshenziswa ubuhle. Ukwenza Namaqiniso Eshintshile Izinkundla Isihloko imvamisa kuba mnandi kakhulu. Ngokwesibonelo, ungakwazi ukuthola le ngomhla ka-14 Februwari.
Daily - esinye isigaba iziqu. Sikhishwe emva imisebenzi yansuku zonke Inani lezikhathi ecacisiwe. Okwamanje, lawa ezingavamile kakhulu, amabhonasi ezifana zanikezwa izinguqulo ezindala umdlalo.
Ezivamile - isihloko elula. It kuvela njalo, ebese enikeza ukukhushulwa izibalo (ngokuvamile, kodwa akusho lokho ngempela). Kungaba wusizo esikhathini esizayo. Alihlukile. Ngaphandle kwalokho, i-ukwenza umsebenzi. Kwezinye izimo, zikhona ezifihliwe. Okungukuthi, uma khaphi sesihloko ku "PV" akazange ukufunda, ungeqa kubo.
National - mhlawumbe isigaba ngobukhulu futhi ewusizo kakhulu imibhalo ngaphezu kwamakhanda abalingiswa kule mdlalo. isihloko Precast, njengoba ungase ukuqagela, uya ezejwayelekile eziningana. Okuningi ngokunembile, ukwenze neketanga elikhulu futhi eside yezigaba ezinikeza esicongweni ezithile. Ezinye isengezo uhlu uzokunika isihloko lokuqoqa in the game. Liyanezela izici yomdlali owenziwa njalo. Kungenxa lezi abadlali benze yonke uchungechunge izimfuno ukuthi kuphela ezinikelwa yidolobha lase-"PV" izihloko. Umhlahlandlela Okugcwele ube kulo - kungcono nzima ukuyenza. Ikakhulukazi uma ucabangela ukuthi iningi izihloko ayisebenzi e version Russian yomdlalo. Ngakho masizame ukufunda kuphela ongakhetha ewusizo kakhulu futhi ezithakazelisayo.
Phela, uqaphele - kukhona kulungiselelwa zesifunda, futhi kukhona evamile. Eyokuqala kuyoba kabusha njalo ushiya endaweni ethize. Ngemva kuzodingeka ukuthatha umsebenzi futhi, bese akhiphe ke. Lokhu akulona yinto emnandi kakhulu abadlali.
Manje okuncane mayelana nalokho okuseza. Thatha isikhathi sakho futhi ukubekezela - uwadinga. Abanye abadlali ngeke sintele sithi ukuthi sine akusho ubuhlungu, ngoba akubona bonke izihloko ingatholakala ngokushesha futhi kalula. Futhi uma kuziwa lokuqoqa version, uma ngaso sonke kuzodingeka uzame angabacwasi. Kungaba mnandi ukuba umngane (noma eziningana kangcono) ngalo kinina uyakuwufeza imisebenzi ethize oyinikezwe. Kodwa uqaphele - hhayi yonke imisebenzi engenziwa iphathi. Ezinye kuyodingeka wenze ematfuba.
Njenganoma isihloko kule "PV"? Ukuze wenze lokhu, kukhona uchungechunge imfuno. Wena ekuqaleni uthole ithuba ukwenza, ukusebenzisa umugqa isiqalo, uthole in yokusungula yakho inothi ekhethekile. Libonisa amathiphu amancane okuthola isihloko esithile. Uma ngikhuluma iqiniso, iningi olayini ukuthandwa usizo oluncane. Ukuze baqonde lihunyushwe kwelesiHeberu amathiphu Korean kungaba nzima. Ngakho-ke, uma kungekho avtoputi esabelweni, baye kuhle sizame ukuthola futhi uthole kule "PV" izihloko. ngeke Umhlahlandlela Okugcwele lula ukuhlupheka kwakho.
Konke kuqala nge yokuthi une ukufinyelela esithile umdlalo. Khona-ke ekhoneni eliphezulu kwesokudla kwesikrini ungena ngemvume lizovela umcimbi omusha. Cindezela isidingo isithombe umkhonto ke - kwi "Thola" (noma "call") Ukhiye. Ngemva look at the ithebhu "Izenzakalo" - isihloko manje izoboniswa khona njengoba umsebenzi. Kuphela yokusungula kufanele khulula okungenani eyodwa iseli - uqukethe okufakiwe ezithile kanye namathiphu. Abakwazi ukuthengisa ukuba abathengisi. Ngakho, iziphi izihloko abadlali 'inzalo kakhulu?
Hyde sesihloko ku "PV" ( "Izimfihlo ekujuleni" hhayi kuphela) - yinto Kuyathakazelisa eziningi abadlali. Asiqale nge samuntu ucishe elula, okungase kuphela wenza. Ngokwesibonelo, cabanga isihloko "iso elibukhali." Lokhu samuntu inhlangano. Luhilela ukuqaliswa imigqa imfuno eziningana ukuthi banamandla alulona olwawo wonke umuntu. Kungcono ukwenza umsebenzi emazingeni aphezulu.
Isihloko "iso elibukhali" ku "PV", lapho umhlahlandlela othulwe ukunaka kwethu, kuthe kubalulekile kuqala kuzo zonke abadlali nge ukuhlaselwa ngokomzimba. Ngemuva kokuqeda zonke izimfuno uthola 12 ngoba-ke. Phakade. Isihloko kungaba "bangagqoki," usho bazosala uhlu ekhethekile.
Ukuze yawo udinga ukwenza okungenani 4 uchungechunge izimfuno. Line "Ice River", "Lavigne Gorge", "Beach Umkhawulo Omkhulu" nesithi "Ukubhujiswa Idolobha". Kulesi "iso elibukhali" uzokunika izihloko ezincane ezivamile, okuyinto futhi unikeze umfutho izibalo.
Indlela uthole ke? Qala ukwenza "ice umfula". Finyelela 201.976 amaphuzu emhlabeni ezingeni ukuphakama mayelana 17-18 amamitha, khona-ke thatha imfuno. Landela imiyalelo ku-"Pyro" isihloko. Vele-ke yilokho kanye esikudingayo. Quest ngokuthi "Altare emfuleni ezineqhwa." Sidinga ukuthatha kuye ngesikhathi 232 981 (ukuphakama 25 metres) bese ukundiza phezu amaphuzu ambalwa, eyamba ezimayini. Kungcono ukusebenzisa avtoputem. bangabaphingi bonke kumephu-15 izinombolo ( "Ice Road").
Manje, iphuzu lesibili. Hyde sesihloko ku "px" emva update ayikashintshi okwesikhathi "iso elibukhali." Qala ngokwenza isigaba uchungechunge "Avalanche Gorge" (325 975), iya umsebenzi "izikhali Iqhwa giant". Take it at 61 981 (ukuphakama 25 metres, njengoba evame kakhulu), ke flyby kumephu amaphuzu ambalwa futhi Ketha out 4 okwami.
Okulandelayo - "Beach Omkhulu Umkhawulo". Ucala iketango at 541 958. Sidinga imfuno "Odlule embhoshongweni Dead", "Ekhaya Tower Syuanmin," "Ukucinga phetho inkemba." Umsebenzi wokuqala ezithathwe 531 967. Kwanele ukufinyelela Tower of the Dead (444 970). Khuphukela esiqongweni salo. Isigaba sesibili eyatholakala ngesikhathi 569 929, futhi, kudingeka ukufinyelela tower ne bagijimela khona. Kumephu kukhona ngesikhathi uhlela 581984 (phansi). imfuno Kugcine ukuthi kuyadingeka - kuba 'inkemba phetho Ukucinga ". Thatha kumephu 525 928, bese usebenzisa i-avtoputi ku "Imicimbi" uthole komunye 9 izinkemba, bese bambe ke.
Yahlala "Doom Idolobha". Kusukela lolu chungechunge izidingo umsebenzi "Mystery Night Ghost" (ukubulala izixuku ezimbalwa, zingabantu cishe 38-56 ezingeni), "i-altare Broken" (ngokumba ezimayini), "Akuyena phefu lula" (crystal ukumba emhlabeni Doom idolobha esiqhingini esiseduze Terr ), "Inkulumo okhokho" (Zazimba okwami, ngaphansi kwamanzi, uthatha umsebenzi emzini ebulalayo amaphilisi lasendulo). Konke ngemva kwalokho uyoba isihloko "iso elibukhali" ku "PV". Hyde, njengoba ungabona, elula Madness. Into esemqoka - njalo ulandele izixhumanisi. Basuke zibonwa e isisekelo ekhethekile ulwazi. Kodwa incazelo yalo, njengoba umthetho, singanikezwanga. Ngakho-ke kubalulekile ukuba sitadishe lo mhlahlandlela kabanzi. Lezisekelo ngokuvamile nje unikezwa izixhumanisi for ukuqoqwa kanye ukulethwa izimfuno. Hhayi elula kakhulu, ngoba awukwazi ukuqonda kahle ukuthi ukulungiselela.
Into elandelayo oyithandayo eziningi - isihloko "ngokumamatheka okuzingela" ku "PV". Hyde uveza ukuthi kubalulekile kuqala kuzo zonke amakilasi imilingo, njengoba inikeza ukukhushulwa 18 kuhlasela. Etholwe emva 5 amaketanga "izindaba" (amarekhodi). Nansi ewusizo "Avalanche Gorge," "Umlilo Intaba," "Beach Omkhulu Umkhawulo", "Doom Idolobha" futhi "Isiqhingi a izinyoka eyinkulungwane." Qaphela ukuthi kakade siye nazo ezinye ngamaketanga. Kungenzeka ukuthi une-izihloko evamile kakade. Ngakho-ke, abadlali belulekwa ukuba ngokushesha enze ephelele uchungechunge Kveta kwabanye "amarekhodi". Lokhu kuzosiza ukuba ngokushesha babuthane izihloko eziningi.
Esimweni sokuqala ithatha 2 isabelo kuphela. Anomoya ukuba kwenziwe, ikakhulukazi uma kakade wazama "iso elibukhali." Udinga imfuno wokuqala ( "ithambo itshe Imfihlo" - esithathwayo endaweni kuboniswe ngaphambili, ngemva kwalokho kuzodingeka knock out zesixuku (Ice Giant 99 ezingeni) into, uwela nge Amathuba 50%, isitha kuyinto evamile, kodwa "ubuhlungu"), futhi "Imfihlo ezulwini emhosheni." Take it at 305.912 - kubalulekile ukuthi ugcwalise 25 zempi simisiwe emfuleni simisiwe emfuleni elinezinhlamvu level 95. Bayakhothama akuzona zonke isixuku.
Kubizwa njengo- "Umlilo Intaba". Ukuze uthole isihloko "ngokumamatheka ezidwengulayo," kufanele enze umsebenzi wokuqala kuphela. It is ethathwe iphuzu kumephu 400 993 Konke ukwenze ukubulala 3 izinhlobo izixuku ezingeni elincane (akazidluli 23). "Omkhulu Beach Reach" - omunye uchungechunge. Idinga imfuno ngokuthi "Lotus inhliziyo ezineqhwa." Kuyadingeka ukuba ugcwalise isixuku 50 ezingeni 55 - umoya yokulila iqhawe, bese benika uthisha umsebenzi. Wenziwa emva izixhumanisi 562 978. Manje "Doom Idolobha". Kudinga imfuno yesibili lapha. Ngesikhathi kokuthola "ngokumamatheka okuzingela," uma uke kuthathwe isihloko "iso elibukhali" lokhu, wayezobe wenza. Udinga ukubulala izixuku evamile (20, 20 no-10 izingcezu) 51-53 ezingeni.
"Isiqhingi a izinyoka ayizinkulungwane" izodinga ukuthi imisebenzi wokuqala nowesithathu yochungechunge. Ukuze uqale, uphuze ngesikhathi 678.889, bese fly ngakho usebenzisa avtoputi kungabuyeli kuleyo ndawo. Kuyinto efiselekayo ukwenza njalo esikhathini engamamitha hhayi eliphezulu kakhulu. Ngokulandelayo, zuku elandelayo ngokuthi igama elithi "imvubelo Endless", bese ungakwazi uqhubekele "ngokumamatheka okuzingela" futhi. Thatha umsebenzi 635 874. Kuyinto nakutlhogeka mechanical crab ezingeni 40 futhi ojenene iglonosov. Bonke eduze nedolobhana abadobi, izitha ezivamile.
Le nganekwane ophilayo
inketho Landelayo - isihloko "ophilayo legend" ku "PV". Hyde uthi uzonikezwa i ezengeziwe ezingu-20 ukuze ngokuvikelwa ngokwenyama yohlamvu. Isici esibalulekile kuwo wonke amakilasi. Ngakho-ke, kuvela abaningi behluleka.
Uma sikhuluma iqiniso, uma uke wahlanganyela amaqembu izihloko kungenzeka ukuthi uyoba kakade. Into wukuthi "Ukuphila Legend" - lutho kodwa uchungechunge izimfuno igcwaliswe umugqa "Ice River". Lokhu kusho ukuthi kufanele kusukela ekuqaleni kuze kube sekupheleni ukuze nikwazi ukulidlulisela ukuthola isihloko umhlangano. unhlangothi ezingavamile inhlanhla, akunjalo?
Kodwa musa ugijimele ukuba sijabule ngawe. Thola isihloko akubona bonke banikezwa ithuba. Empeleni, ukuze iyithole, nje ukwenza imisebenzi yezinye amaqembu kwakunemibhalo eqoshiwe phezulu unezela izici. Ake ufunde mayelana nezimfuno, okungase kubangele ubunzima obuthile. Ababona kangaka - 2 kuphela.
I wokuqala ubizwa ngokuthi "Black Igazi". Kuthathwa ezingadingekile ukwenza lonke uchungechunge "eqandisiwe River," okusho ukuthi ungabuyela it nganoma yisiphi isikhathi. Ezithathwe 237 937. Kuyadingeka ukubulala i boss elite ngokuthi "Emuva-black." Kubonakala ngezikhathi ezahlukene kusukela 1 ukuya ku-4 izinsuku 237 935 (noma eduze naso). Empeleni, lawo abulawa "umngane" kuleli qembu, njengoba ubhekwa elite. Kwenziwe umsebenzi omkhulu, kodwa lunganqotshwa uma noma iyiphi DD ( "amanoni"), futhi ukuphulukiswa. Inkinga main siqukethe ekutholeni yalo.
Isigaba sesibili, okungase kubangele ezinye ubunzima ngesikhathi umdlali - kuba "Ngo ezinyathelweni isitha." Libuye akuyona impoqo. Ayiswe izixhumanisi kumephu 285 960 Setting eyakhelwe isimiso ajwayelekile - lokubulala ubasi elite. Lesi sikhathi uzovela ngezikhathi at 289.963 nge esingaba 3 kuya 7 izinsuku. Ranger ngokuthi umphathi kwalasha. kuyingozi kakhulu abadlali. Kill ke kungaba party okuhle kanye nomqashi emhlabeni RB. Quest owawuvame ukwenziwa ezingeni 100+. Empeleni, yilokho kuphela. Okungenele "Living Legends" ukwenza ngokuphelele "ice emfuleni" - futhi ngeke ukwazi ukubhekana nezinkathazo msebenzi.
Isihloko esilandelayo - "Ukukhala Wolf" ku "PV". Hyde uthi ngemva esitholile, phansi ukhulise Magic Attack +18. Ngakho lesi sihloko kubaluleke lokuqoqa amakilasi imilingo. Ukuze uyithole, kuyodingeka zama angabacwasi. Phela, manje kuzomele udlule amaketanga eziningana nge "irekhodi". Ngokwesibonelo, kuyasiza "Avalanche Gorge," "Umlilo Intaba," "Beach Omkhulu Umkhawulo" nesithi "Ukubhujiswa Idolobha". Uma uke eqoqwe amanye amaqembu izihloko walabo okuphakanyiswe, ne "Gorge" nesithi "Ukubhujiswa" ke ziyoqedwa. "Beach" futhi akufanele kusenze nobunzima. Kodwa "Umlilo Intaba" kuyoba kuphela lapho besanda kuqala. Futhi kuyodingeka ujuluke.
Kusukela "kwemihosha izikhukhula zeqhwa ezintabeni ze" kufanele sinake imfuno eyodwa kuphela. Futhi nje ngoba into ozikhethela wena. It ngokuthi "Inqwaba of nobukhulu." Ukuze sifinyelele 352.940 amaphuzu, bese ziyambulala boss elite esithi Buyela nomhlophe. Njengoba kunjalo nge umenzeli Emuva-black kumephu endaweni 348 940 nge esingaba izinsuku 1-4 of.
Kusukela "Umlilo Intaba" Udinga izimfuno yakamuva. Wanted kuzinga encane "abagcini Black". Ithathwe ku-441 998. Kuyadingeka ukubulala abagcini ambalwa. Babonakala imizuzu 10 emva ukumba ezimayini. Ungakwazi uwathole avtoputi in the game. Bute abagcini imfuno kanzima ngeke bakwazi ukudlula eliphansi izinhlamvu. Ngokulandelayo, kudingeka senze 'wesabe imfihlo. " Impoqo ukuqedela zonke izabelo uchungechunge "Umlilo Intaba," kodwa ngenxa "impisi oyedwa 'idingeka. Thatha imfuno kumephu izixhumanisi 450 914, bese ukubulala scoundrels. Leli zinga mini-boss 34. Eliphansi izinhlamvu ukubhekana ngaphandle kosizo. Sizokwenza nje ukuya emgodini 19 (abantu). Emnyango uzonikwa imfuno ngokuthi "Olubunjiwe Inhliziyo". Ngaye ukubulala Lee Kun. Lona kumqashi emgodini abantu 19. Kuphumelele ngaphandle kwezinkinga kuleli qembu, futhi kuphela (yebo, uma uke izuzwe okungenani ezingeni 30-40 futhi ukwazi ukubhekana isiboshwa zabo).
Okulandelayo udinga ukuba umsebenzi, "ekufeni kweNkosi Cobra" kusukela "Beach Omkhulu Umkhawulo". Lona penultimate, kodwa akusho lokho ngempela esikuziphathimandla umsebenzi. Ukuze sifinyelele izixhumanisi 577 987, bese ziyambulala boss I obunesihluku yinkosi. He is ezingeni 70, kungenzeka ukuba sibhekane ngokuphumelelayo kokubili party futhi okufanayo. ukwenza kuphela umsebenzi ongcono, uma kakade bephumelele 90-100 ezingeni in the game. Into yokugcina sidinga kuphela - it is ngokugcwele ukuqedela uchungechunge "Doom Idolobha". Ukuze wenze zonke izimfuno bese sifinyelele 688 955. Uzodinga bambe umgodi futhi ukubulala boss, ngubani kuzovela ngemva. Akunzima kakhulu, kodwa kungcono ukukwenza neqembu.
Yini enye eningayenza ukunikela? Ngokwesibonelo, isihloko "Star Young" ku "PV". Hyde kwalo kusengathiwa indima ethile eyodwa kuphela uchungechunge izimfuno. Kuyinto "umhlaba non-iphila." Isihloko unika +20 ukuzivikela magic. By the way, Kungcono ukuqoqa emazingeni aphezulu.
Iqala endaweni 553 654. Kuyadingeka ukuthola eMzini Dragons Wei Xiao Bao futhi bakhulume naye. Ehamba emhlabeni azungezwe engaphakathi emzini, avtoput ehluleka. Kungase kudingeke bafune uhlamvu. Badlule iphuzu 519 692, ukukhuluma iqhawe, ukuze lowo ozomthumela. Lokhu kungenziwa kunoma yiliphi izinga, angeke babe nezinkinga. Kodwa ngemva ukukhuluma nawe teleport ukuba ephuzwini elilandelayo ukuba baphathe ngamaketanga. Lapha izinkinga ziqala. Uzodinga ukugcwalisa okuningi ephezulu ezingeni izixuku (101), okuyinto akubalwa eqenjini. Ingabe izinqwaba agryatsya izixuku, kwashona ngokushesha. Ngakho-ke kungcono aqhubeke iketango emazingeni aphezulu. Stuffed? Thina angene iphuzu 142.974, bese usebenzisa avtoputem ukuthatha imfuno esilandelayo. Khona-ke enye inkinga. Ukuze sifinyelele 148.962 ke ukubulala 50 izipoki ezimibalabala 91 ezingeni. Lena akuyona siyisinqumo esinzima kunazo zonke. Elingezelelako sizodinga ukufinyelela umnyango uMuzi Rime. Kube uzothola omunye umsebenzi. Kuyadingeka ukuba kudlule okuthiwa Rime futhi knock out kumqashi Dark Phoenix itshe ekuvuseleleni. Nge iqembu emazingeni aphezulu ishesha, imizuzu engu-40, ke udinga ukuya ePharadesi lasemhlabeni lapho futhi ukubulala Brahma (bangagxambukeli). Ngemuva ke uzobona altare. Uma ukuya kuye, sithembisa imfuno nokumbiwa okwami. Delves emgodini efanayo, kuyinto ibhokisi Brahma. Okulandelayo udinga ukuthola 203 996 futhi ulinde amaminithi 5. Kungcono yini ukushiya leli phuzu. Ngemva pass usebenzisa avtoputi imfuno uhlamvu. Ekugcineni, kufanele uhambe ngokusebenzisa 179 954, bese bambe up kushaft wathi. Yilokho. Manje, "Star Young" wathola.
Khona-ke kukhona isihloko "darling fortune" ( "PV"). Hyde uveza ukuthi uthola +12 ukuhlaselwa ngokomzimba emva ukusetshenziswa ngokuphelele iketanga. Penda njengoba kuvela kulesi sihloko isikhathi eside. Kodwa zazingekho izinkinga ukudlula akufanele kube. Wena ngempela nje ukuqedela eziningana izimfuno ngamaketanga. Okungukuthi: "Beach Omkhulu Umkhawulo", "The Island ezinkulungwane izinyoka" futhi "Idolobha Dragons".
I chain yokugcina zonke yangempela isimiso - fly-wakhuluma-Rummage ngilambatha. Ayikho super-abaphathi noma into ekhethekile. Umsebenti ngokuthi "isazi-mlando" Awukwazi ukwenza. Vele uthathe ukuze uthole umfutho ezinhle izibalo ekugcineni. Uzodinga wonke isiboshwa, okuyinto in the game, bese ziyambulala boss khona.
Futhi banake imfuno "Insight". Kungcono ukwenza kuyo PVP ukulwa. Kungani? Kufanele bafe futhi bayovuswa. Okuwukuphela kwendlela ukuqedela uchungechunge "Idolobha Dragons" ekugcineni. Ngokuvamile, ulandele avtoputi ku "Imicimbi" ithebhu. Kuyokusiza uthole "darling fortune".
Yini enye eningayenza ukunikela? I last ezithakazelisayo lokuqoqa isihloko - "The emihumeni isiphepho" ku "PV". Hyde uveza ukuthi kumele enze kuphela ezingeni 100+, kokuba okungenani oyedwa ukuvuselelwa. Kanti-ke futhi ezimbili. Inikeza isihloko kwagadla 60. Kodwa ukuze uthole ukuthi akulula kanjalo.
Kungani? Udinga nje bahamba ngezinyawo phezu kwezingqimba isiboshwa ephezulu ezingeni abulale umphathi ngesikhathi. Ngaphezu kwakho konke, ukugcina ngaphakathi isikhawu ezithile. Kuye kwenziwa kuphela eqenjini. imisebenzi ukuthi nje ayikwazi ukutholwa Lokhu kufihlwe.
Udinga ukubulala Chernokryla 1 ihora. Lokho ukuya zonke isiboshwa inkathi ethile yesikhathi. Countdown iqala ngokushesha ngemuva emnyango isiboshwa. Futhi une ukubulala 60 amaminithi aigio (itshe futhi isibuko) ku YaseCarlsbad Ingunaphakade. Ngo mihume kuzofuneka ukuthi uwine Umhlaba idla Ganga futhi Gidriona. Ziyakwazi konke Ubukhulu ezahlukene. Lena lokususa omkhulu. Zonke unikezwa, bathi, imizuzu engu-60. Ekugcineni, kudingeka ukubulala Aurogona YaseCarlsbad Eternity ihora nemizuzu engu-20. Yilokho.
Futhi, abadlali abanesifiso abaholela isihloko kule "PV" "Izimfihlo ekujuleni." Nge update omusha ngamunye, njengoba umthetho, wanezela uchungechunge entsha "ibhonasi". Okwamanje, akuwona wonke ukuwakhohlwa ngokushesha futhi kalula.
Ngokwesibonelo, ungakwazi ngokuphelele ukwenza uchungechunge "Robins River-2". It is ethathwe iphuzu 426 647. Ngaleso amazinga aphezulu siwela e cishe ihora noma amabili. Ngokusekelwe esimisweni of lonke uchungechunge "Inkulumo ngilambatha" noma "inkulumo-wabulala ngilambatha." Ayikho into enzima ngakho. Okokuqala ukusebenzisa ngokusebenzisa avtoputi futhi ukuqedela isigaba sokuqala. Okulandelayo, thatha omusha 469 676 futhi usebenzise ushintsho othomathikhi umlingisi the "Izenzakalo" ithebhu. Ngokwalesi simiso wenziwa "River Robins-2". Ukuxhumanisa ngqo kungabonwa ku ezikhethekile ulwazi izisekelo. Hyde sesihloko ku "PV" "Izimfihlo ekujuleni" akugcini lapho.
Kubalulekile ukuya uchungechunge "Usilika King Ezintabeni". Ukuze wenze lokhu, ukufinyelela 358.652, bese ulandela imiyalelo ku "Imicimbi". Akukho nzima noma ekhethekile akudingekile. Lapho ukuthatha elilandelayo imfuno uchungechunge? Siza base ezithile, okuyinto okukhulunywe ngaye ekuqaleni. Kwenza akukho mqondo ukuze kuhlu yonke izixhumanisi izikhathi eziningana. Isimiso ilula - ikakhulukazi lapha udinga ukukhuluma noma izinhlamvu noma ugcwalise eliphansi izixuku.
Njengoba Abaqondisi for isihloko kule "PV" sibonisa ukuthi kukhona manje neketanga ngaphansi kwegama "Idolobha werewolves." Okwamanje okusebenza ngezikhathi. Yenza it is hhayi Kunconywa. Nakuba, ungazama. Licala 251 647. Kuyadingeka ukhulume Fox Idolobha Werewolf. Ngesikhathi esifanayo, njengoba kusho abadlali abaningi, iketango kungaqedwa. Phela, udinga ukuya izixhumanisi 239 694, khona-ke kufanele bambe umgodi. Kulapho, akusiyo. Lokhu kuyinkinga enkulu. Ngomqondo onabile, e yolwazi oluthile, ungabona kanjani it enza ngaleli ketanga. Uma unenhlanhla, uzokwazi ukukwenza. Empeleni, kungcono uhlu olugcwele ezikulolu "PV". Hyde ethulwa ukunaka kwethu, kuthe ekahle ukuze uthole nolwazi oluyisisekelo kanye amaqembu be. Manje ngoba sewuyazi ukuthi yini okufanele uzilungiselele endabeni ethile.
Njengoba i-Microsoft Office 2010 ukuze kusebenze usebenzisa Ukhiye Mkhiqizo